Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll in Computer dhakhso ah
Sawirrada dukaamada Roll Camera in miday aad iPhone iyo dukaamada photos tudhay on iPhone - ka email ah Reserved, ka MMS / iMessage, goobta ah, ama ka codsi, oo sidaas. Mararka qaarkood, nabadgelyada ee seenyada uu aad musuq iPhone, aad rabto in laga yaabo in ay u gudbiyaan iPhone camera Roll in computer u gurmad. Markaas, sawiro ku giringiriya Camera uu noqon doono ammaan u isticmaalka.
Habka 1. Buur iPhone sida saari Drive ah si dhoofinta iPhone Camera Roll
Habka 2. Isticmaal Wondershare TunesGo Retro si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll in PC
Habka 3. Isticmaal iPhoto si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll si Mac
Habka 4. Isticmaal Ciidamada Image si ay u gudbiyaan Roll Camera ka iPhone si Mac
Sii kordhaya aad iPhone sida drive dibadda adag kaa caawin kara inaad helaan xasuusta gudaha ee aad iPhone. Markaas, aad gacanta dhoofin karto sawiro in Camera iPhone ku giringiriya in computer.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in PC dhex cable USB ah. Your iPhone si dhakhso ah loo baari doono kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Auto-Play hadal ka soo bixi. Riix sawirada iyo videos si uu u furo folder iPhone halkaas oo ay dhammaan sawiro ku giringiriya Camera waxaa lagu badbaadiyey Import. Tallaabada 3. Markaas, jiitaa sii jeedi photos doonayo ka iPhone Camera Roll in PC.
Habka 2. Isticmaal Wondershare TunesGo Retro si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll in PC / Mac
Wondershare TunesGo Retro ama Wondershare TunesGo Retro (Mac) waa qalab kala iibsiga iPhone awood badan. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo oo dhan ama sawiro la doortay ka iPhone Camera Roll in PC ama Mac. Waxa aad ku dhacaa waa in xitaa gelineya inaad si ay u gudbiyaan iPhone Photo Library in PC / Mac sidoo.
In socda, waan kuu sheegi doonaa sida loo wareejiyo Roll Camera on iPhone in PC. Haddii aad qabto Mac ah, fadlan isku day version Mac iyo qaadid talaabooyinka la mid ah.
Tallaabada 1. Marka, rakibi iyo abuurtaan TunesGo Retro aad kombuutarka.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone aad PC via cable USB ah. Barnaamijkan wuxuu si toos ah loo ogaado doonaa iPhone iyo muujiyaan ay info aasaasiga ah ee suuqa kala hoose.
Tallaabada 3. Riix "Sawirro" khaanadda tagay. Furmo suuqa maamulka sawir ayaa u muuqda dhinaca midig. Dooro photos doonayo in Roll Camera oo guji "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in aan computer". Markaas, daaqad file browser yar booda. Dooro meel on your computer ku kaydiso Camera this Roll dhoofiyo videos iyo sawiro.
iPhoto waa codsi kombiyuutar gacanta sawir barnaamijyo ay abuureen Apple Inc. Waxaa la soo dari la Macintosh PC kasta oo tan iyo 2002-dii, markii hore sida dhinaca ugu wayn ee Suite ilife codsiyada maamulka warbaahinta computer-ka. iPhoto dajiyaan karaa, diyaarin, bedelo, print oo waxaad bixisaa photos sare sawiro ka dib markii yihiin shisheeye ka dhigay, waxaa laga yaabaa oo cinwaan looga dhigay, calaamadeeyay, soocaa oo ka kooban galay isu soo (oo loo yaqaan "jeer"). Sawiro keli waa la beddeli karo iyada oo qalabka lagama maarmaanka ah gacanta ku sawirka, tusaale ahaan, isbedel red-isha channel, farqiga iyo iftiimo, tafatir, iyo alaabta resizing, iyo awoodaha kale ee aasaasiga ah. iPhoto ma, ka dibna mar kale, siin wax badala faaiidada dhamaystiran oo mashaariic, tusaale ahaan, Apple ee u gaarka ah, gaar ahaan Aperture, ama Adobe ee Photoshop (in aan la isku qasmi la Photoshop Qaybaha ama Album), ama GIMP. Halkan tallaabooyinka ay tahay in si Mac wareejiyo aad sawiro iPhone Camera Roll la iPhoto.
Connect aad iPhone si Mac la USB cable ah.
Burcad app iPhoto haddii uusan laftiisa furo.
Photos Select ka iPhone Camera Roll.
Riix Import *** (tanuna waa tiradii sawiro aad rabto in aad soo dhoofsadaan yahay).
Ciidamada Image waa barnaamij codsi ka Apple in awood aad si sawirro ka Polaroids sare ama scanners kuwaas oo midkood straightforwardly la xiriira in mishiinka ama nidaamka wareejiyo. Ciidamada Image waa scriptable la Applescript, oo waxaa laga yaabaa in la Mac OS X v10.4 (Tiger ayaa). Waxaa si weyn loo isticmaalaa in codsiyada badan oo ay soo dhoofsadaan iyo agabka xog dhoofinta ka iPhone si Mac
Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u gudbiyaan iPhone sawir camera liiska aad Mac:
Connect aad iPhone la Mac via cable USB ah oo ay maamulaan codsiga Ciidamada Image ku Mac
Laga soo bilaabo liiska qalabka on Image ah, qabashada doorteen aad iPhone.
Si aad u hesho gurmad ah u Camera ka photos Roll, dooro caga wax soo saarka ah oo ku saabsan Mac.
Hadda dooro sawiro aad rabto in lagu wareejiyo.
Waxaad riix dejinta oo dhan si aad u hesho dhammaan tiirarkii mar kaliya ama ay doortaan sawirada ka iPhone Camera Roll sidoo.
> Resource > iPhone > 4 Siyaabaha Bedelka iPhone Camera Roll in PC / Mac